चमेरो | Ratopati
के मान्छेको मात्रै रगत खाएर बाँच्ने चमेरो हुन्छ ? access_timeकात्तिक २२, २०७६
चमेराको फुल कस्तो रंगको हुन्छ ? मेरो भाइले मलाई यो प्रश्न सोध्यो । उनको प्रश्न सुनेर म अकमक्क परें । मैले अनुमानको भरमा जवाफ दिएँ– पहेंलो पहेंलो होला, नत्र खरानी रंगको । मेरो जवाफ सुनेर ऊ मरिमरि हाँस्यो । कारण सोध्दा उसले दिएको जवाफ सुनेपछि पो म त झसंग भ...